African Oil oo mashruuc Isbitaal ka fulinaysa degmada Ufeyn ee gobolka Bari. – Radio Daljir
Seteembar 17, 2011 12:00 b 0
Ufeyn, Sep. 17 – Shirkadda African Oil ayaa mashruuc dhisme Isbitaal ka fulinaysa degmada Ufeyn ee gobolka Bari. Sidaa waxaa Daljir u sheegay Bashiir Cabdi Xuseen oo ka tirsan maamulka degmada.
Bashiir Cabdi Xuseen oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ayaa sheegay in shirkadda African Oil ay ku deeqday Isbitaalkan kaasoo ay fulintiisu ku kici doonto 35 kun oo doollarka Maraykanka ah.
Isbtiaalkan ayaa waxa uu ka koobnaan doonaan afar qol iyo barsad, waxase uu mas’uulkan intaa ku daray in mashruucan uunan dabooli karin baahida degaanka. Waxa uu sheegay in ay shirkadda ka codsadeen in mashruuca lagu kordhiyo qol la dhigo maydka iyo daarad.
Mudane Bashir waxa uu sheegay in shirkadda African Oil ay xiriir la leedahay dadka degaanka isla markaana la sameeyay mas’uul qaabislan xiriirka dadwaynaha.
Mar uu ka hadlay haddii ay shirkadda African Oil biloowday wax-soo-saar, ayuu sheegay in ayan jirin wax shaqo ah marka laga reebo sahanno ay ku sameeysay meelo kala duwan oo gobolka ah, inkasta oo uu raaciyay in aan maamul ahaan loo soo gudbin wax qorshe ah ama naqshad ah oo ku saabsan sahannadaas.
African Oil waa shirkad fadhigeedu yahay magaalada Vancouver ee Galbeedka Canada, waxana ay indhawaale sahan batrool qodid ah ka waday degaannada Bari ee dawladda Puntland ee Federaalka Soomaaliya.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah oo maanta yimid Garowe, si diirranna loo soo dhaweeyey.